जेरियाट्रिक सेवा भनेको के हो ? वार्ड के हो ?
जेष्ठ नागरिकहरुलाई दिइने स्वास्थ्य सेवालाई जेरियाट्रिक सेवा भनिन्छ । प्रौढाबस्थामा लाग्ने रोगका प्रकारहरु फरक रहने, प्रौढाबस्थाका लागि उपचार पद्धतिनै फरक हुने हुँदा यसै विषयमा बिशेषज्ञता हासिल गरेका डाक्टरहरु (जसलाई जेरियाट्रिसियन भनिन्छ) ले मात्र जेरियाट्रिक सेवा दिन सक्दछन् । जेरियाट्रिक सेवा मात्र दिनका लागि अलग्गै ब्यवस्था गरिएको वार्डलाई भने जेरियाट्रिक वार्ड भनिन्छ ।
1 Career News and Info भाद्र २३, २०७४
2 Carbon Trade
3 नेपालमा पाइने अल्लो बारे जानकारी